Alaabta alaabta Ikea oo leh rack ama cannage | Bezzia
Maria vazquez | 10/09/2021 18:00 | Samee naftaada
Erayada Ingiriisiga ayaa aad iyo aad ugu badan erayadayada maalin kasta. In kasta oo aanaan garanayn sida loo tarjumo qaar badan oo iyaga ka mid ah, haddana waxaan awoodnaa inaan kula xiriirno hawl gaar ah. Waxay ku dhacdaa erayga jabsiga, oo la xiriira dad badan oo leh isbedelada iyo isbadalka guud ahaan dadka hal -abuurka ah ay ku sameeyaan alaabta guriga weyn ee Iswiidhan.
Maanta waxaa jira shabakado badan oo fikrado ah si loo beddelo alaabta Ikea. Qaar badan oo ka mid ah hackska alaabta guriga ee Ikea waxay ku saleysan yihiin isbeddel qurxin oo gaar ah sida kansarka kiiskan. Waana taas alaabta guriga oo leh shabag wicker ama cannageWaxay noqdeen moodo qiyaastii afar sano ka hor mana aysan lumin xooggooda.
1 Isbedelka cannage
2 Alaabta guriga Ikea waxay ku jabsadaan qashin
2.1 Dharka dharka ee Ivar
2.2 Dukaanka Buugaagta Billy / Oxberg
Waa inaan ku laabannaa 2017 si aan u xasuusano guuxa ee alaabta cannage. Kadib, adduunka qurxinta, laakiin ma aha oo kaliya adduunka qurxinta, ayaa mar kale sasabtay dabiiciga, farshaxanka ... iyo shirkadaha naqshadeynta ma aysan ka labalabeyn inay ku daraan alaabta guriga noocan ah ururintooda.
Cuncunka, sida tan caadi ahaan loogu yeero farsamada tidcan, wuxuu ku dhiirrigeliyay daraasiin naqshadeeyayaal inay abuuraan uruurinta alaabta guriga sanadihii la soo dhaafay. Annaguna lama yaabin sababta oo ah shabakaddan rattan waxay siisaa shaqsiyad iyo diirimaad alaabta guriga ah.
Rattan ama shabakadaha wicker Waxay sidoo kale soo jiiteen dareenka tirooyin kala duwan oo DIY ah. Waxaana la arkaa sicirka ay alaabta wax cunaan sida caadiga ah gaaraan, qaar badan ayaa ku arkay mashruucaan habka kaliya ee loogu dari karo gurigooda. Waana in la shaqaynta qashin -qubka iyo shaqsiyeynta maaddadan iyo alaabta guriga iyo alaabta guriga laga soo bilaabo xoqan, waa wax fudud, maadaama aad heli doonto waqti aad ku xaqiijiso.
Alaabta guriga Ikea waxay ku jabsadaan qashin
Waxaa jira xad -gudubyo alaab guri oo Ikea ah oo aan la arki karin. Annagu, sida caadiga ah, waxaan doorannay kuwa aan ugu cadcad nahay. Waan samaynay annagoo tixgelinayna qiimaha asalka ah ee alaabta Ikea si ay u helaan iyo dhibaatada mashruuca.
La shaqee canugSidaan soo sheegnay, ma aha mid dhib badan, laakiin waa inaad tixgelisaa dhowr arrimood markaad samaynayso. Iyada oo ku xidhan adkaanta maaddada iyo qaabka lagu soo bandhigay, waxaa laga yaabaa inay xiiso leedahay in lagu qooyo biyo diirran si ay u sahlanaato fidinta ama ku dayashada, sida aad rabto inaad u wacdo. Intaa waxaa dheer, waxay noqon doontaa mid aad muhiim u ah inaad maanka ku haysato koollada saxda ah - haddii aad doonaysid inaad ku dhejisid - had iyo jeer maskaxda ku hay shabakadda iyo dusha aad rabto inaad ku dhegto labadaba.
Dharka dharka ee Ivar
Nidaamka kaydinta IVAR Waa wax la taaban karo in ay ka jawaabaysay baahiyaha kala duwan ee macaamiisha Ikea muddo 50 sano ah. Qoryo adag oo aan la daaweyn, maaddo dabiici ah oo aad u waarta oo adkaysi u leh oo aad ku daryeeli karto adoo adeegsanaya saliid ama wax, dharka Ivar waa midka ugu caansan taxanahan. Cabbiraadda 80x30x83 cm, waxay leedahay laba armaajo oo aad u guuri karto si aad ula qabsan karto booska baahiyahaaga. Oo kaliya waxay ku kacaysaa € 59.
Ku -habeynta armaajadan qashin -qubka waa mid aad u fudud maadaama ay na tusayso Sebtember Wax ka beddel barashadaada. Wuxuu ahaa kii na ogaaday suurtagalnimada isku -darkaan oo si fudud u sameeyay, si toos ah ugu dhejinaya albaabka albaabbada alaabta gurigaan iyo ku darida xoogaa gacan qabasho ah. Laakiin ma aha suurtagalnimada keliya marka ay timaaddo beddelidda armaajaddan sida aad ka arki karto sawirka kore; Waxaad kaloo gooyn kartaa albaabada oo aad ku beddeli kartaa qoryaha qayb ka mid ah canage, taas oo ku dareensiinaysa waxa ku jira armaajada.
Dukaanka Buugaagta Billy / Oxberg
Ikea ayaa sidaas leh 5 ilbidhiqsi kasta waxaa la iibiyaa dukaanka buugga Billy meel dunida ka mid ah. Xaqiiqda cajiibka ah oo tixgelinaysa, waxaa dheer, in buuggaagta Billy uu ku jiray buugga diiwaangelinta shirkadda tan iyo 1979. Maanta waxay sii ahaanaysaa ikhtiyaarka ay doorbidayaan akhristayaasha, laakiin ma aha oo keliya akhristayaasha.
Qeybta shelf ee Billy / Oxberg oo leh albaabada galaasku waa xulasho weyn oo lagu kordhinayo meelaha wax lagu kaydiyo ee guryaheena. Cabbiraadda 80x30x202 cm, waxay leedahay armaajo la hagaajin karo iyo awood weyn. Ku xidh shabagyada albaabada galaaska Waxa kale oo ay noqon doontaa mid aad u fudud, sida aad ka arki karto fiidiyaha Lone Fox Fiidiyow fayras ah oo ka mid ah kuwa u heellan haakaha alaabta Ikea.
Dabcan ka baxsan ciyaarista faahfaahinta shabakadda waad awoodaa midab ku ciyaar si aad u gaarto natiijooyin aad u la yaab leh ama joogto ah qurxinta gurigaaga. Isbeddel fudud oo ku dhaca xirmooyinka alaabta guriga, ayaa si buuxda u beddelaya. Miyaad jeclaatay hacks -kan alaabta guriga Ikea? Soo hel kuwan kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Samee naftaada » Alaabta guriga Ikea waxay ku jabsadaan rack ama cannage